FAMPIELEZAN-KEVITRA TAO TOLIARA : Nanatanteraka diabe ny vahoaka miaraka amin’i Andry Rajoelina
Na dia mbola tsy tonga nitsidika ny tanànan’ i Toliara aza ny Kandida laharana faha 13 tamin’ ny fanombohana ny fampielezan-kevitra dia efa naneho ny firaisankinany sahady ny vahoaka tao an-tampon-tanànan’i Toliara sy ny manodidina ireo mpiara-dia aminy. Diabe namakivaky ny tanàna no nanehoana ny hafaliana tamin’io fotoana io. 11 octobre 2018
Horakoraka miandrandra fanantenana ary nivoitra tamin’izany ny hoe : “ isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina”. Ny Depiote Siteny Randrianasolo-niaiko voafidy tao an-toerana sy ny Depiote Tinoka Roberto voafidy tao Sakaraha no mpitarika navitrika tamin’ izany ka nisy ny fitoka-nana sy fampahafantarana ireo foiben-toerana na ny “quartier général” miisa sivy, izay natao hiasan’ny mpikambana iray manontolo mandritra ny fotoam-pifidianana ity.
Efa dodona sy sasa-miandry avokoa ny mponina any amin’ny faritra Atsimo ary velom-panantenana noho ny fanehoam-pitiavan’i Andry Rajoelina manoloana ny tanindrazana. Mila fanarenana tokoa i Madaga-sikara eo anatrehan’izao fahantrana goavana eo amin’ny lafin’ny fampandrosoana izao ka ilaina ny fananana tanora gasy vonona sy sahy toa azy.
Faritra maro teto Madagasikara moa no efa niray hina nanatanteraka izany diabe izany tamin’ny fanokafana ny fampielezan-kevitra na tsy mbola tonga tany an-toerana aza ny kandidà Andry Rajoelina, toy ny tao Toamasina, Befandriana Avaratra, Ihorombe, Ihosy, Vangaindrano ary Manakara. Mbola hitohy izany ary samy manamarika avokoa fa ny kandida Andry Rajoelina irery ihany no vahaolana eto amin’ny Firenena.
Telo mianadahy efa nahazo 160 tapitrisa Ariary nadoboka am-ponja vonjimaika FISOLOKIANA (123) 18 juin 2019 Niakatra Fitsarana ireo zandary telo voarohirohy KOLIKOLY TENY AMIN’NY LALAM-PIRENENA RN4 (106) 17 juin 2019 Nahazo ny maro an’isa ny kandidà avy amin’ny IRD VOKATRA VONJIMAIKA FENO NAVOAKAN’NY CENI (87) 18 juin 2019 Depiote teo aloha miisa 50 no ho tafaverina raha tsy miova tamin’ny voka-pifidianana ANTEMIERAM-PIRENENA (86) 18 juin 2019 Tratra ny mpamily kamiao nitondra entana halatra milanja 8 taonina ASAN-JIOLAHY TOAMASINA (84) 18 juin 2019 Natontongan’ny IRD ny TIM tao Vakinankaratra FIFIDIANANA DEPIOTE ANTSIRABE II (82) 18 juin 2019